Kutsvaga Blog Zvinyorwa neTechnorati | Martech Zone
Kutsvaga Blog Zvinyorwa neTechnorati
China, December 28, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Technorati chishandiso chakanakisa - asi ini handina chokwadi chekuti zvinhu zvacho zvese zvinotengeswa zvakadii. Chimwe chezvinhu zvandinofarira kugona kutsvaga mablog ese emamwe ma tag. Ini ndinonyorera kune kumwe kutsvaga.
Enda ku http://www.technorati.com/tag uye unogona kuwana mamaki epamusoro nguva ino KANA iwe unogona kuisa mamwe mazwi ekutsvaga. Izvo zvinoguma URL zvinotaridzika seizvi: http://www.technorati.com/posts/tag/adobe+apollo (kana uchitsvaga adobe apollo).
Kana iwe ukacherekedza, iwe unogona chaizvo kunyorera kune izvo RSS fudza izvozvi! Uchishandisa muverengi wekupa senge Google Reader, unogona kuwana zvakanyanyisa kukwirwa nezvinyorwa zveblog pa “Adobe Apollo” kana chero musoro wenyaya waungazotumira kana zvatumirwa! Izvo zvakaita sekumisikidza yambiro kune iyo yese blogosphere.
Imwe nzira yekushandisa yeizvi kutsvaga musoro wenyaya mushure kublogi nezvazvo. Izvi zvinogona kupa zvirimo nezvimwe zvine simba mareferenzi uye trackbacks!
Wepamusoro Adsense Misoro: Ajax, Flash, WordPress uye Firefox
Microsoft: Ndokumbira undiwedzere kune yako Ferrari Mailing Chinyorwa
Zvita 28, 2006 na3: 10 PM
Kutenda nemashoko emutsa. Ndiri kufara kuti munoifarira uye ndinokutendai nekuita kuti vamwe vazive.
Dec 29, 2006 pa 11: 01 AM
Heh, NDICHIRI kutadza kuwana Technorati kugadzirisa blog yangu! Ndanga ndichivatsvagira MAZUVA ~! Kana iri tech tech, hapana chinokundikana sekubudirira:
"Kana mukasanzwa chero ani mukati mevhiki, ndokumbirawo mutikumbire ruregerero nekunonoka kwatingaita tichitadza kutsigira."
Dec 29, 2006 pa 11: 12 AM
Pazvakaitika kwandiri, ndakarasikirwa nenhoroondo yemwedzi yakati wandei neTechnorati. Zvakatora chinguva, asi vakazozvigadzirisa. Ini handikwanise kufungidzira ese mablog ayo izvo izvi zvinofanirwa kuitika uye kuti zvinotora nguva yakareba sei kuti vazvigadzirise. Ini ndakatoyedza kudzima bhurogu yangu kubva kwavari uye kutanga patsva… hazvina kushanda. Ivo vachiri kuita kunge vanoshandisa imwe caching mashini.
Iva nemwoyo murefu. Ndine chivimbo kuti vachazvigadzirisa!
Dec 29, 2006 pa 11: 17 AM
Hongu, neniwo. Zvichida ari kukura marwadzo. Ishe vanoziva kuti ndiri kutambura neRuzivo Kuzadza!
[Uropi… hunorwadza… vanoda… chokoreti!]
Zvita 29, 2006 na12: 54 PM
Vince, ndine urombo kuti waifanirwa kusvika kwatiri kuburikidza neiyo blog yaDoug, asi ini ndawana dambudziko nekugadziriswa kweblog rako mune yedu system, ndakarigadzirisa, raita ping nyowani, uye ini ikozvino ndaona zvaunotumira munguva pfupi mune yedu index.
Zvekare, ndine hurombo nezve izvo. Dorion
Zvita 29, 2006 na1: 31 PM
Wow! Zvakadii izvozvo!
Ndatenda, Dorion !!!
Zvita 29, 2006 na1: 37 PM
Taura nezve simba uye otomatiki! Zvino, ndeapi Cialdini priniminles akatyaira izvi?
Zvita 29, 2006 na8: 50 PM
Ngatitaurei kuti vaive vanhu, vachitaura nevanhu, uye zvishoma email (yakashandurwa kuburikidza neblog blog)
Izvo zvine basa here? dc
Zvita 29, 2006 na9: 15 PM
Chaizvoizvo, kana iwe ukasanganisira mutsa, kuziva, uye kufunga.